2022 – Year – Channel Myanmar
Iron Chef: Quest for an Iron Legend (2022) Iron Chef: Quest for an Iron Legend (2022)===============================IMDb Rating - 7.0/10Iron Chef ဆိုတဲ ဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲကြီးပြန်လာပါပြီ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက နာမည်ကြီးတဲ့ စားဖိုမှူးတွေဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ စာဖိုမှူး Iron Chef လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ သူတွေကို စိန်ခေါ် ဟင်းချက်ပြိုင်ပြီး Iron Chef ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုအရယူရမှာပါ။ Iron Chef တွေအနေနဲ့ကလည်း သူတို့ရဲ ဂုဏ်ကို ဆက်ထိန်းဖို့ ရေကုန်ရေခန်းကြိုးစားကြမှာပါ။Episode တစ်ခုချင်းစီမှာ စိန်ခေါ်သူစားဖိုမှူးတစ်ယောက်ဟာ Iron Chef တစ်ယောက်နဲ့တစ်နာရီအတွင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ themeနဲ့ ဟင်းငါးပွဲကို ချက်ပြုတ်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်စားဖိုမှူးတွေရဲ့ ဟင်းချက်ပုံချက် နည်းတွေကို တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ချက်ပြုတ်တာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ အိမ်ထောင် ရှင်တွေ စားဖိုမှူးတွေ အတွက် အကြိုက်တွေ့စေမှာ သေချာပါတယ်။ (ဒီစီးရီးရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူများကတော့ CM Team မှဖြစ်ပါတယ်။)File Size.............(500 MB) Quality...............WEBDL 720p Duration............45Mins(@Episode) Subtitle..............Myanmar Hardsub Format...............MP4 Genre.................Show, Reality-TV Translator..........CM Team Encoder..............SWM720P (300 Mb)-----------------------------------Episode(1)Yoteshin ...
TMDb: 7.0/10 2500 votes
Anna (2022) Anna (2022)အပိုင်းသစ် (၃ နှင့် ၄)(1080p ရပါပြီ) အားလုံး စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Bae Suzy ရဲ့ ဇာတ်ကားအသစ် 'Anna' ကို CM fan တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ...ယူမီဟာ အမြဲလိုလို လိမ်ညာတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ အဲဒီလို လိမ်ညာမှုတွေကပဲ သူမရဲ့ ဘဝကို ​အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ လိမ်ညာမှုကြောင့် အခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝနဲ့ သူမနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။ယူမီရဲ့ အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ ဂျီဟွန်းကတော့ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့သာ အလေးထားတတ်တဲ့သူပါ။ ဟျွန်ဂျူ ဆိုတာကတော့ အမြဲတမ်း သူများထက်သာချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ယူမီနဲ့လည်း ဆက်ဆံရေးအနည်းငယ် တင်းမာပါတယ်။တကယ်တမ်း ယူမီ ယုံကြည်လို့ရတဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသူက သူမရဲ့ စီနီယာဖြစ်တဲ့ ဂျီဝန် တစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။ယူမီတစ်ယောက် အလိမ်အညာတွေနဲ့ဘဝကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမှာလဲ? ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲ အချိုးအကွေ့တွေ ထပ်ပြီး ရင်ဆိုင်ရမလဲ? ဆိုတာ ဒီဒရမ်မာလေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။ (အညွှန်းကိုတော့ Hay Thar Oo က ...
The Secret House (2022) The Secret House (2022) အပိုင်းသစ် - ၅၈ ရပါပြီ ဇာတ်လမ်းရှည်ကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် Second Husband အပြီး အပိုင်း ၁၂၀ ရှိတဲ့ ဇာတ်ကားသစ်တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ သဲလွန်စတွေနောက် လိုက်လံရှာဖွေရင်း သူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်ရှိနေတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ထဲ ပါဝင်ပတ်သက်မိသွားတဲ့ ရှေ့နေတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။အဓိကပါဝင်ထားတဲ့ ကာရိုက်တာတွေကတော့...မိသားစုရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတစ်ခုကြောင့် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို ဖုံးကွယ်ထားရတဲ့ ရှေ့နေဖြစ်သူ Woo Ji Hwan ...Woo Ji Hwan ရဲ့ အချစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ထက်မြက်ပြီး နွေးထွေးတဲ့နှလုံသားပိုင်ရှင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မလေး Baek Joo Hong ...ပိုက်ဆံ၊ အရည်အချင်း၊ မိသားစုနောက်ခံစတဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမှုစစ် Nam Tae Hyung ...အစ်ကိုဖြစ်သူ Nam Tae Hyung ကို လက်စားချေဖို့ တိတ်တဆိတ်ကြံစည်နေတဲ့ ဗီလိန်မ Nam ...
Miracle (2022) Miracle (2022) အပိုင်းသစ် - ၄(1080p ရပါပြီ) အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ Idol လေး လူးဝစ် ... သူ့ရဲ့ အလုပ်ကြိုးစားမှုနဲ့ သီချင်းကောင်းတွေကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ လူကြိုက်များတဲ့ အနုပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အီဆိုရင်းကတော့ လူးဝစ်ရဲ့ အမာခံပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့မှာ လူးဝစ်လို Idol တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အိပ်မက် မက်နေသူလေးပေ့ါ။နာမည်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လူးဝစ်ဟာ သူ့ရဲ့ အေဂျင်စီနဲ့ မန်နေဂျာ ရဲ့ ပိုမို တင်းချုပ်ချယ်ခြင်း ခံလာရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုရီးယား ပြန်ရောက်တုန်းလေး လျှောက်လည်ချင်လို့ လူးဝစ်တစ်ယောက် ဟိုတယ်ကနေ ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ထွက်ပြေးလာတဲ့ လူးဝစ်နဲ့ အီဆိုရင်းတို့ ဆုံတွေ့ပြီးနောက် ဘယ်လို Miracle တွေ ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါဦးရှင်။ (အညွှန်းကိုတော့ Hay Thar Oo က ရေးပေးထားပါတယ်။) Aired: June 24, 2022 -- Aired On: Friday, Saturday Genres: Drama, Comedy, ...
Queer as Folk (2022) Queer as Folk(2022)LGBTQ+ ထဲက Q ရဲ့အရှည်ကောက် Queer or Questioning ဆိုတာ “လွတ်လပ်စွာ ချစ်ခင်စုံမက်သူများ”လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တဲ့1999 ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ British စီးရီးကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီစီးရီးဟာ Gender မခွဲဘဲ နှလုံသားရှိသူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ LGBT ရပ်ဝန်းအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာပါဇာတ်လမ်းကိုတော့ New Orleans ပြည်နယ်မှာ အခြေတည်ထားပါတယ် ဘရိုဒီဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ဆေးကျောင်းကနေ ကျောင်းထွက်လာပြီး သူ့အိမ်ရှိရာ ဇာတိမြို့ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ အိမ်နဲ့လည်း အဆင်မပြေ သူ့အဆက်ဟောင်း နိုအာဆိုတဲ့ ကောင်လေးကလည်း ရည်းစားအသစ် ရနေတာနဲ့ ကြုံပါတယ်စိတ်ပြေလိုပြေငြား LGBT ကလပ် ဘေဘီလုံကို သွားပျော်ပါးရာကနေ ဘေဘီလုံကလပ်မှာ သေနတ်သမားတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ရမ်းသမ်း ပစ်ခတ်တာနဲ့ ကြုံရပါတယ်အဲဒီ ပစ်ခတ်မှုမှာ မင်ဂတ်စ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကို ဝင်ကာပေးရင်း ဘရိုလီ ဒဏ်ရာရသွားပြီးတဲ့နောက် ဘရိုလီ နဲ့ မင်ဂတ်စ်တို့ ရှေ့ဆက်ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကြမလဲ...ဘေဘီလုံရဲ့သေနတ်သံတွေ ဆူညံတဲ့ ညတစ်ညကို ...
A Cunning Destiny (2022) A Cunning Destiny (2022)အပိုင်း (၁၀)"မာယာများတဲ့ဖူးစာ"........................................................... Women on Top ၏ လက်ထောက်တည်းဖြတ်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “မွတ်မနီး”ဟာ သူမဘဝတွင်အရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ရတာကို နှစ်သက်သဘောကျတယ်သိုပေမယ့် သူမ၏ မော်ဒယ် သူငယ်ချင်း “ကလတ်ဒေါင်း “နှင့် ဆရာဝန်ဖြစ်သူ “ထက်ချ်”တို၏ မင်္ဂလာပွဲတွင်သူမသည် သတိုသားရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရှေ့နေဖြစ်သူ “ချင်ကရစ်”နှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အငြင်းအခုံဖြစ်ခဲ့တယ်သာမာန်ဆိုရင်တော့ သူတိုနှစ်ဦးဟာ ပြန်တွေ့ဖို မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို ထင်ထားခဲ့ကြပေမယ့်သူတိုနှစ်ဦးကြားမှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်သွားပြီးနှစ်ယောက်သား အိပ်ရာကနေ အတူတူနိုးလာသောအခါ ………သူမ “ မွတ်မနီး” ဟာ နာမည်ကြီးမင်းသမီးဖြစ်သူ “ဆိုဖီတာ” ရဲ့ မျက်နှာပြုပြင်ရေးနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့သတင်းမှားကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်လို တရားစွဲခံရသောအခါ ……….Mukmanee က အမှန်တရားကို ဘယ်လိုထုတ်ဖော်မလဲ မှားနေတဲ့လူရဲ့ မျက်နှာဖုံးကို ချွတ်နိုင်ပါ့မလားရှေ့နေဖြစ်တဲ့ ချင်ကရစ်ကရော ဘယ်လို ကူညီပေးမလဲမွတ်မနီးနဲ့ ချင်ကရစ်တို အချစ်က ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှူနိုင်ပါပြီAired: May.26 , 2022 Aired ...